Xisbigii UDUB Oo Shaaciyay Inuu Ka Baxay Saaxada Siyaasada Sababna Uga Dhigay Guul-daradooda Xukuumadda Siilaanyo – Araweelo News Network (Archive)
Hargeysa(ANN)Masuuliyiinta ugu saraysa Xisbiga UDUB ayaa ku canbaareeyay Xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo inay u adeegsatay gudida diiwaangelinta Ururada si looga saaro saaxada Xisbigooda oo si rasmi ah u baabi’isay isla markaana ujeedada ay sidaa u yeeshay
ku tilmaamay ugu wacan tahay inay doonayso Somaliland inay bur -buriso.
Masuuliyiinta UDUB oo shir Jaraa’id maanta ku qabtay xaruntooda magaalada Hargeysa, waxa kaloo ay qireen inay ka hadheen tartanka doorashooyinka golayaasha deegaanka oo sidaa ku waayeen xuquuqdoodii xisbino. Cali Maxamed Waracncade iyo Axmed X Daahir oo ahaa xubnaha Gudoomiyihii UDUB dhowaan sheegay inay u sharaxan yihiin xisbigaa marka la gaadho doorashada Madaxtooyada, ayaa warbaahinta la hadlay waxayna iyadoo ay weheliyaan xubno kale kulankaa ay saxaafadda u qabteen ku sheegeen in Xukuumaddu ay u joojin wayday, isla markaana ay samaysay tab iyo xeelad kasta oo ay ku fulisay Burburinta Xisbigaa.
Sidoo kale waxa ku eedeeyeen xukuumadda inay u adeegsatay Guddida Diiwaangelinta iyo Komishanka Doorashooyinka oo ay sheegeen inay isku bahaysteen iyagoo ku dooday inay dhamaantood hay’adahaasi u adeegaan Madaxtooyadda, waxaanay xuseen talaabooyinkaasi oo dhan markii ay qiimeeyeen Madaxweyne Siilaanyana Codsigoodii dhagaha ka furaystay inay go’aansadeen si rasmi ah inay uga hadhaan Tartankii Doorashada Golayaasha deegaanka.
Masuuliyiinta UDUB waxa ay baaq iyo Dacwad ku lidi ah bur-burka xisbigooda lagu sameeyay u direen Qaadhaan bixiyayaasha Doorashada iyagoo xusay inay u hawl geli doonaan sidii ay xuquuqda ay leeyihiin u raadsan lahaayeen, balse waxay tilmaameen inaanay marnaba wax hagar daamo ku noqda Qaranka aanay ku talaabsanayn.
Dhawaaqa kooxdan oo ka mid ah garab yar oo kasii taagnaa xisbiga UDUB, ayaa kusoo beegmay kadib markii dalab ay kaga dalbadeen gudida doorashooyinka in mudo loogu daro xiligga uu xidhmayo liiska musharixiinta si ay usoo dhamaystiraan musharaxiinta golayaasha deegaanka ee dalka, balse laga diiday, taas oo isa sii kaba raacisay gebi ahaanba inuu si toos ah uga boxo saaxada UDUB oo ahaa xisbul xaakimkii sideed sanadood iyo dheeraad hayay talada iyo awooda xukunka Somaliland.
Guddoomiye Ku Xigeenkii Ururka Suxufiyiinta Somaliland ee SOLJA Oo Muqdisho Ka Deggay